Lammaa Magarsaa: 'Uummata keenyaaf yeroo qaqqabuu qabnutti hin qaqqabne' - BBC News Afaan Oromoo
Lammaa Magarsaa: 'Uummata keenyaaf yeroo qaqqabuu qabnutti hin qaqqabne'
Goodayyaa suuraa 'Uummata keenya dhiifama gaafanna' - Obbo Lammaa Magarsaa
Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa rakkoon naannoo Benishaangul Gumuziifi Lixa Oromiyaatti uumame, uummata hedduu miidhuusaaf dhiifama gaafanna jechuun marii dhaabbilee siyaasaa Oromoo har'a gaggeeffame irratti dubbatan.
ODP, ABO fi KFO'n haala nageenyaa tibbannaa naannoo Oromiyaa ilaalchisun marii jaarmiyaalee siyaasaa har'a taasifameen cinaatti ibsa waliinii kennaniiru.
Rakkoon naannoo Benishaangul Gumuziifi Lixa Oromiyaatti uummame uummata keenya baay'ee miidheera kan jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa miidhaan uummata irra ga'e isaan gaddisiisuu himan.
Hiriira Oromiyaa: Mormii mootummaa moo gaaffii mirgaa?
'Akka biyyaatti itti fufuufis diigamuufis yeroon cee'umsaa kun murteessaadha'
Pireezidaant Lammaa, komiin uummanni mootummaan yeroodhaan nuuf hin qaqqabne jedhee dhiyeesse komii sirrii ta'uu isaatin uummata keenya dhiifama gaafanna, hiriirri bahames hiriira sirriidha jennee amanna jechuunis dubbatan.
Yeroo qaqqabuufii qabnutti qaqqabuu dhiisuu keenyaan uummatni miidhaa cimaaf saaxilameera kan jedhan Obbo Lammaa Magarsaa "Rakkinichi bal'aa ta'uusaa yeroo hubanetti gama gargaarsaatiinis ta'e gama nageenyaan uummata cinaa dhaabbachuuf yaalii guddaa taasisaa jirra" jedhan.
Rakkoon kun dhimma naannoolee lamaa ta'uu isaatiin Mootummaa Federaalaa walin ta'uun qaamolee uummanni akka ajjeefamuufi buqqa'u taasisan, akkasumas kan qabeenya saaman seeratti akka dhiyaataniifi olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf hojjechaa akka jiran pireezidaantichi himaniiru.
Pirezedaanti Lammaan jaarmiyaaleen siyaasaa marii waliin jalqabne dafnee waliin xumurachuun barbaachisaadha jedhanii, "Sababa rakkoo keenyaatiin Lixi Oromiyaa rakkoo keessa jira. Uummanni keenya kaleessas sodaa keessa ture har'as sodaa keeessa jira.
Nageenyi boora'uu jaarmiyaa siyaasaa kamiyyu kan barbaadu hin jiru. Nutis akkuma amma marii jalqabanne kana dafnee akka xumurannu akkuma jirutti ta'ee, uummanni keenyas kana baree hubatee naannoon keenya nagaa akka ta'u, waanti hundumtuu gara seeraafi heeraatti akka dhufu taasisuuf uummanni keenya nu deggeruun barbaachisaadha," jedhan.
"Gara fulduraattis uummata keenya walin mari'annee wantoonni ifa goonu baay'een ni jiru" jedhan.
Dura Taa'aan Kongirasii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa rakkoolee nageenyaa mul'atan furuuf uummanni Oromoo tokkummaan waliin dhaabbachuu akka qabu dubbatan.
Kana malees dhaabbileen siyaasaa Oromoo qabsoo uummata Oromoo afaaniin qofa osoo hin taanee hojiidhaan agarsiisuu danda'u qabu jedhan.
Bakka amma irra ga'ame kana kan ga'uu dandeenye- kan mana hidhaa jiru hidhaadhaa bahee, kan biyyaa bahe biyyatti deebiyee, kan amma aangoorra jirus kan gara aangootti dhufe haarsaa gati jabeessa Qeerroofi Qarreen Oromoo kaffalaniin jedhan Dr. Mararaan.
Laga amma irra jirru kana ce'uudhaaf waan sadii irratti walii galuun barbaachisaa akka ta'e kaasanii sabni walhire, waldiigeefi waliin dhabbachuu dadhabe laga ce'uu waan hin dandeenyeef tokkummaa sabaa keenyaa barbaachisaadha.
Kanaaf, tokkummaa saba keenyaa irratti hundi keenya jabaannee hojjechuun hojii manaa keenyadha, jedhan Dr. Mararaan.
Itti dabalaanis humni haaraa Qeerroon miliyoonaan socho'ee kanaan nu ga'e kun tokkummaadhaan eeguudhaaf hundi keenya ga'ee qabnas jedhan.
keessumaa ammoo kanaan dura kan ture dhaabbileen siyaasaa Oromoo luka qabanii walharkisuudha, kan jedhan Dr. Mararaan, "Kun dhaabbachuu qaba," jedhan.
Hayyu Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitin mootummaan gaafiwwan hiriira tibbanaa irratti ka'aa turaniif beekkamtii kennuunsaa sirriidha jedhan.
Rakkoon nageenyaa karaa Baha, Lixa, Kibbaafi kibba bahaan mul'atu dhiibbaa maqaa daangaatin uummata Oromoo irratti taasifamaa jirudha jedhan. Kun daangaa ballifachuudhaaf halleellaa taasifamudha.
Daangaa ballifachuun alattis, sochii uummanni Oromoo yeroo ammaa kanattii diddaa garbummaa tokkummaadhaan dhaabbatanii morman kana duubbatti deebisuudhaaf kan taasifamaa jirudha jedhu Hayyu Dureen kun.
"Jiijiirama hafuura namaaf kenna kana, Oromoofis, jaarmiyaalee siyaasaafis, saboota biratiifis, boodatti deebisuudhaaf yaalii taasifamu kan of keessatti qabatudha.
Warri jijjiirama dhufaa jiru duubatti deebisuu yaalan kan hin dandeenye ta'anillee nageenya keenya booresuuufi sodaachisuu hin dhiisan. Kaanaaf, "Isa kana haala mullatu kana keessatti adda baafannee waliin hiriiruudhaan akka maseensinu kan irratti mariyanneerraa. Isa kana irratti walgargaarra," jedhan Obbo Daawud Ibsaa.
Gochaa kanas dhaaboleen Oromoo walin ta'uun ni maseensina jechuun dubbatan.
Gama biraatin garuu rakkoon dhaabolee siyaasaa Oromoo gidduutti mul'atu dhimma dhaaboliin walin mari'achuun irratti walin hojjetanidha jedhan.
Itti gaafatamaan Poolisii Godinaa Qeellam Wallaggaa rasaasaan rukutaman
Ministirri Muummee haadha warraa isaa ajjeesuun shakkame himatamuufi
Gonfoon waggaa 33 dura hatamee ture bataskaanaaf deebi'uufi
Lubummaan koree hundeesitoota mana lubummaa Oromiyaa maaliif qabame?
Taphataan duraanii raagbii 'haala suukanneessaadhaan' maatiisaa fixe
Haleellaa Hanaawu, Jarmanii keessatti raawwateen namoonni saddeet du'an
Namichi 'cut, copy fi paste' kalaqe ganna 74tti du'e
Duuti konkolaachisaa tokkoo Keeniyaa keessatti mormii kaase